China naịlọn pole Ezubere maka ụlọ mbuli ụlọ na suppliers | H & F.nylon
Ejirila igwe eji eme ihe nịịlị na ngwaọrụ elevator ruo ọtụtụ iri afọ maka uru nke ịta mmanụ onwe onye, ​​ịdị arọ dị mfe na nchebe nke eriri waya. Ihe karịrị 80% nke ihe mbuli elu na-etinye ihe naịlọn ma nwee ike ịnweta ndụ ndụ nke ngwa ọrụ niile. Dịkwa ka gọọmentị na-achịkwa ụlọ ọrụ nchara maka mmetọ ya na gburugburu ebe obibi, a ga-eji ngwa igwe nylon mee ihe na ngwaọrụ igwe mbuli.
Na-eso anyị na-ewebata ụfọdụ nkọwapụta nkọwapụta nke igwe naịlọn bululu elu:
MC Naịlọn etinyere na povọ pulley
Ihe karịrị 95% naịlọn gbakwunyere 5% ihe ndị ọzọ
4040 * ∅110 * 100
4040 * ∅120 * 100
Anyị, Huafu anwaala iduzi, ime ka ndị ahịa anyị nwee mkpali nke ihe okpokoro Naịlon kama iji igwe ihe. Ọtụtụ ndị ahịa ejirila na-etinye ihe ọgịga nylon mgbe ha nyochachara ọnụọgụ niile nke wiil naịlọn. Ha kwesiri imeghari mbụ naịlọn pulleys n'okwu anyị mechara soro ndị ahịa anyị. Ha na-ekwu na ndị ọrụ ha na-enwe ike ịwụnye pọịlịị maka ịwụnye ihe naịlị na-ebelata ike ọrụ ha, chekwaa oge ọrụ ha ịrụ ọtụtụ ọrụ. Ha nwere ike ịnwekwu oge ezumike maka ịwụnye pọịlịị pọịlị ga - eme ka ọrụ niile dị mma.
Ka oge na-aga, ọtụtụ ndị ahịa na-amalite ịghọta uru nke nylon pulleys ma ha dị njikere ịnwale ngwaahịa ọhụrụ iji melite ogo ngwaahịa ha niile n'akụkụ nchekwa, ịdị mma, mma. Anyị kwenyere na nylon pulleys ga-enwekwu ngwa na ụlọ ọrụ mbuli.
Nke gara aga: Factlọ ọrụ China maka Ogwe Naịlọn Gburugburu - naịlọn Pin na nnukwu ike - H & F.nylon
Osote: naịlọn gia maka igwe